Rooting Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)& Stopped on Logo Fix 100% Tested - MPPG
Home / Uncategorised / Rooting Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)& Stopped on Logo Fix 100% Tested
minokekar August 6, 2016	Uncategorised 1,278 Views
Samsung Galaxy S5 (G900H) တွေ တော်တော်များမျာ.း
CF auto root နဲ့ root ဖောက်လိုက်ရင် Logo ရပ်သွားတတ်ကြပါတယ်.
အဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ သာမန် Service သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့
Firmware ပြန်တင်ဖို့ပဲ စဉ်းစားကြတော့တာပေါ့
တကယ်တော့ မလိုပါဘူး. ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပီးသားပါ.
Recovery လဲပေးလိုက်ရုံနဲ့ logo ပြန်တက်လာပါ့လိမ့်မယ်.
အောက်မှာ recovery ဖိုင်ပါ ပါတဲ့အပြင် တစ်လက်စတည်း
CWM ကနေ တစ်ခါတည်း root zip ကို install လုပ်လိုက်ရုံနဲ့
rooot တန်းပေါက်ပါတယ်. ဘာ error မှ မရှီပါဘူး စိတ်ချလက်ချနဲ့သာ သုံးပါ.
ပထမဦးဆုံး ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ zip ကို ဖြည်ချပီး CF auto root နဲ့ အရင်ဖောက်လိုက်ပါ.
Logo ရပ်သွားပါလိမ့်မယ် စိတ်မပူပါနဲ့ Phili touch recovery.tar ဖိုင်လေးကို ပြန်ပီး
odin ကနေပဲ flash ပေးလိုက်ပါ တက်သွားပါ့လိမ့်မယ်.
နောက်တစ်ခါ Root ပါ ထပ်ဖောက်ချင်ရင်တော့ storage ထဲ supersu.zip ဖိုင်လေးထည့်ပီး
CWM ကနေ install လုပ်ပေးလိုက်ပါ.ဒါဆိုရင်တော့သင့်ဖုန်း Root access ရရှိသွားပီဖြစ်ပါတယ်.
Donwload (Cf auto root+CWM+Rootzip) = 35 MB
Pcloud Link Here
Rar Pass – minoaker
Previous (Super Doktor) MRT Dongle V1.6 BBK Vivo/OPPO/Xiaomi
Next Xiaomi MIUI 8 Gapps Installer (31.3) MB